Kaonseritra klasika: haharitra ora dimy ho fanamarihana ny andiany faha-100 | NewsMada
Kaonseritra klasika: haharitra ora dimy ho fanamarihana ny andiany faha-100
Hetsika tokana sady goavana, fanaon’ny Madagascar Mozarteum isam-bolana, ny « Kaonseritra klasika amin’ny mitataovovonana ». Tanterahina amin’ny andro alarobia, etsy amin’ny Institut français de Madagascar (IFM) Analakely, izy io. Azo lazaina ho tena nampiroborobo sy nanasongadina ireo mpanakanto manan-talenta amin’ny fihirana na fitendrena zavamaneno klasika ity kaonseritra ity.
Hiavaka amin’ny seho hita hatramin’izay ny hotanterahina amin’ity volana avrily ity, ny 6 avrily izao, raha ny marina kokoa. Andiany faha-100 amin’ny « Kaonseritra klasika amin’ny mitataovovonana » mantsy io. Tsy natao andro alarobia fa asabotsy ny seho satria haharitra ora dimy be izao izany.
Hifandimby hiaka-tsehatra mandritra ity fampisehoana miavaka ity ny mpanakanto sy ny tarika miisa 20, izany hoe, ireo efa nanafana ny kaonseritra hatramin’izay nisiany. Anisan’izany ry Musikanto, ny gropy Imangarivo, Rakotondrazaka Doria, ny Ensemble Vocal Diapason, ny Chœur Maestria, ny Chœur Miangaly, Reinhard Schwarte, sns.
Ankoatra ireo mpiangaly mozika klasika, hanafana ny fotoana ihany koa ny tarika roa samy manana ny maha izy azy : ny tropy Jeannette, mpanao teatra, sy ny Solika, fantatra amin’ny bà gasy. Raha tsiahivina, efa nandray anjara tamin’ny « Kaonseritra klasika » ireo tarika ireo. Marihina fa maimaimpoana ity seho mandritra ny adiny dimy ity.